SMPTE မှ ၂၀၁၄ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုနှင့်ချီးမြှင့်သူများကိုကြေငြာခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2014 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » SMPTE 2014 Honorees နှင့်ဆုချီးမြှင့် Winners ကြေညာ
SMPTE 2014 Honorees နှင့်ဆုချီးမြှင့် Winners ကြေညာ
နှစ်ပတ်လည် SMPTE ဂုဏ်ထူး & ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကို Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းမှ Vision ၏, လိမ္မာပါးနပ်, ဇွဲရှိခြင်းနှင့်ပျနှံကိုမီးမောင်းထိုးပြ
White Plains, နယူးယော့ - သြဂုတ်လ 26, 2014 - Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က (R) (SMPTE(R)), ဆက်သွယ်ရေး, မီဒီယာ, ဖျော်ဖြေရေး, နှင့်နည်းပညာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ရွေ့လျားမှု-ပုံရိပ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ပညာရေးအတွက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ခေါင်းဆောင်ယနေ့မှာကြာသပတေးနေ့အသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်ခဲ့သူထူးချွန်စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များ, အောက်တိုဘာ 23 ထင်ရှား SMPTE 2014 ဂုဏ်ထူး & ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား။
အဆိုပါ SMPTE ကထောက်ခံ 2014 ဂုဏ်ထူး & ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား, IMAXယင်းနှင့် တွဲဖက်. ကျင်းပလျက်ရှိသည် SMPTE အဆိုပါ Loews မှာ 2014 နှစ်ပတ်လည်နည်းပညာဆိုင်ရာညီလာခံ & ပြပွဲ ဟောလိဝုဒ် အတွက်ဟိုတယ် Los Angeles မြို့ကယ်လီဖိုးနီးယား။ အဘို့မှတ်ပုံတင်သူများသည် SMPTE 2014 သူတို့၏ညီလာခံအထုပ်နှင့်အတူဆုအခမ်းအနားလက်မှတ်များဝယ်ယူရန်ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ စားပွဲ၏တစ်ဦးကကန့်သတ်အရေအတွက်ကလည်းဝယ်ယူဘို့ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက်နှင့် ပတ်သက်. နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမှာရရှိနိုင်ပါ www.smpte2014.org.
အဆိုပါ Society မှာဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းဝင်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံများ, ရုပ်မြင်သံကြားထဲမှာဒါမှမဟုတ်မဟာမိတ်အနုပညာနှင့်သိပ္ပံအင်ဂျင်နီယာများ၏တိုးအတွက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားဝန်ဆောင်မှုဖျော်ဖြေကြသူတစ်ဦးချင်းစီကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဒါဟာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုခံရခြင်းများဖြစ်ပါသည်။ ဒီနှစ်, SMPTE စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်တစ်ဦးတည်မြဲစှဲကျန်ရစ်ခဲ့ကြရာ၎င်းတို့၏တီထွင်မှုများအတွက်သုံးနည်းပညာသမား, ရိုသေ။
ဂျော့ခ်ျလူးကပ်အကောင်းဆုံးစာရေးဆရာ, ဒါရိုက်တာနှင့်အထင်ကရအမေရိကန်ရုပ်ရှင်တာဝန်ရှိသည်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်လူသိများဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့လူးကပ်စလည်းရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပြပွဲအသစ်နည်းပညာများ၏မွေးစားအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လူးကပ်စ 1975 အတွက်စက်မှုအလင်း & Magic (ILM) ကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်, ထိုသို့နီးပါး 300 ဇာတ်ကားအဘို့အအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု (VFX) ထုတ်လုပ်ရန်အပေါ်သွားပြီ။ များစွာသောအခြားတီထွင်မှုတွေထဲမှာ ILM မြင့်မားတဲ့ dynamic range ကို (HDR) ပုံရိပ်ကိုထောကျပံ့ဖို့ 2000 အတွက် OpenEXR ဖိုင် format ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါကာတွန်းရုပ်ရှင်စတူဒီယို Pixar 1979 အတွက် Lucasfilm ရဲ့ Graphix Group မှအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 1981 ခုနှစ်, လူးကပ်ရုပ်ရှင်အသံကစနစ်များ၏အရည်အသွေးကိုတိုးတက်မှအသံကုမ္ပဏီသည် THX Co-တည်ထောင်ခဲ့သည်။ 2002 ခုနှစ်တွင် "Star Wars: အ Clone ၏ဇာတ်လမ်းတွဲအပိုင်း II ကို-တိုက်ခိုက်မှု" ပထမအဓိကခဲ့ ဟောလိဝုဒ် 24p high-definition ပေါ်, ဒီဂျစ်တယ်ဖမ်းမိခံရဖို့အင်္ဂါရပ် (HD) ဗီဒီယိုကင်မရာများ။ နည်းပညာသစ်များနှင့်နည်းစနစ်နှင့်အတူရုပ်ရှင်ရုံများ၏အလတ်စားတွန်းအားမိမိပြဌာန်းခွင့်အတွက်, လူးကပ်ထောက်ခံမှုနှင့်သံသယနှစ်ဦးစလုံးကြုံတွေ့။ ဒါဟာသူ့ဇွဲနှင့်ရူပါရုံကိုရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်၏နောက်ဆုံးကျယ်ပြန့်ကလေးမွေးစားခြင်းအတွက်အဓိကအချက်ဖြစ်ကြောင်းယခုရှင်းပါတယ်။
လီယိုနာဒို Chiariglione ယေဘုယျအားယနေ့ဖွင့်အများအပြားဒစ်ဂျစ်တယ်ရွေ့လျားဓာတ်ပုံများကို applications များအထောက်အကူပြုကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းများ MPEG ထား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနောက်ကွယ်ကတွန်းအားဖြစ်စဉ်းစားသည်။ ရိုးရှင်းသော, စံရွေ့လျားဓာတ်ပုံများကို Toolbox များအတွက် Chiariglione ရဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်တွန်းအားပေးရုပ်ပုံများကျွမ်းကျင်သူများကအဖွဲ့ (MPEG) အုပ်စုတစ်စု Moving နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းအဖွဲ့အစည်း (ISO) ၏တည်ထောင်နှင့်အတူ 1988 စတင်ခဲ့ပြီးနှင့်ပစ္စုပ္ပန်တစ်နေ့တာဆက်လက်။ Chiariglione အခိုငျအမာအချိန်မီစံချိန်စံညွှန်း, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရိုးရှင်းများနှင့်ထိရောက်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ MPEG-2 မှ MPEG-4 ၏ကျယ်ပြန့်ကလေးမွေးစားခြင်း, အထူးသဖြင့်, Chiariglione နှင့် MPEG အုပ်စုသည်ယနေ့အထိဖန်ဆင်းတော်မူပြီထိုအလှူငွေမှ apt သက်သေခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြု Roll ကွယ်လွန်ပြီးမှသူတို့ရဲ့ဘဝသက်တမ်းအတွင်းမှာဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းဝင်ချီးမြှင့်ပေမယ့်သည်အဘယ်သူ၏ပံ့ပိုးမှုများကိုထိုသို့သောဂုဏ်အသရေခိုင်လုံလုံလောက်ပါပြီမယ်လို့မဟုတ်သူတစ်ဦးချင်းစီကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည်။
ယောဟနျသ Logie Baird (1888-1946) ကစစျထဲမဝငျဖြစ်ပါတယ် SMPTE ရုပ်မြင်သံကြားနည်းပညာရှေ့ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်သူ၏တစ်သက်တာပံ့ပိုးမှုများကို၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက်ဂုဏ်အသရေ Roll ။ သူ၏အောင်မြင်မှု (1925 အတွက်) ပထမဦးဆုံးတိုက်ရိုက်ရုပ်သံလွှင့်သရုပ်ပြ, ပထမဦးဆုံးလူသိရှင်ကြားပြသအရောင်ရုပ်မြင်သံကြားစနစ် (1928) နှင့်ပထမဦးဆုံးအပြည့်အဝအီလက်ထရောနစ်အရောင်ရုပ်မြင်သံကြားရုပ်ပုံပြွန်များပါဝင်သည်။ ဗြိတိသျှအသံလွှင့်ကုမ္ပဏီ (ဘီဘီစီ) 1929 အတွက် Baird စနစ်ဖြင့်ထုတ်လွှင်စတင်ခဲ့သည်။ Baird 1939 (CBS / RCA ကမွေးစား) တစ်ဦးစက်မှုအရောင် system အပါအဝင်နည်းပညာအသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်; 500 အတွက် 3-line ကို 1941-D ကို system ကို; နှင့် 600 အတွက်အီလက်ထရွန်းနစ် 1944-line ကို color display ပါ။ Baird ကသူ့ 1,000-line ကိုအီလက်ထရောနစ်အရောင်ရုပ်မြင်သံကြားစနစ်၏ Post-စစ်စံချိန်စံညွှန်းအဘို့လိုတယ်လို့မေတ္တာရပ်ခံခဲ့တာပါ။
အဆိုပါတိုးတက်မှုတံဆိပ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ် SMPTE တံဆိပ်ဆုနှင့်အဆိုကိုရုပ်ပုံ, ရုပ်မြင်သံကြား, ဒါမှမဟုတ်ရွေ့လျားမှုပုံရိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအင်ဂျင်နီယာအဆင့်ရဲ့တိုးတက်မှုမှထူးချွန်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ Ioan Allen ကအဆိုကိုရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှုလုပ်ငန်းအားမိမိအများအပြားပံ့ပိုးမှုများကို, အသံသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များအတွက်အထူးသသည်သူ၏တီထွင်မှုမှာအသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် 2014 တိုးတက်ရေးပါတီတံဆိပ်ဆုကိုရရှိထားပြီးပါပြီ Dolby Laboratories, Dolby စတီရီယို (R), Dolby ရောင်စဉ်တန်းကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် (SR), နှင့် Dolby ဒီဂျစ်တယ်လ်အဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစံချိန်စံညွှန်းများအဖွဲ့အစည်းများအားမိမိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောပံ့ပိုးမှုများကိုအပါအဝငျ။
အဆိုပါ Archive နည်းပညာတံဆိပ်မီဒီယာအကြောင်းအရာအနှစ်သာရ၏ရေရှည်သိမ်းဆည်းခြင်း, archive ကို, ဒါမှမဟုတ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုအတွက်သိသိသာသာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်ပံ့ပိုးမှုများကိုနည်းပညာ၏တီထွင်မှုသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သော, နည်းစနစ်, Workflows, ဒါမှမဟုတ်အခြေခံအဆောက်အအုံအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ အဆိုပါ 2014 ဆုဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဘို့မဟာဗျူဟာများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏သုတေသနနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးရန်သူ၏ရေရှည်ပံ့ပိုးမှုများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် Neil Beagrie မှပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Beagrie သုတေသန data တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း, ဒစ်ဂျစ်တယ် Curation နှင့်ဒေတာများ archive ကိုသက်ဆိုင်သောအသိပညာ၏လေ့လာမှုနဲ့ဖြန့်ဝေဖို့ပူးပေါင်းချဉ်းကပ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူကစက်မှုလုပ်ငန်း, အမျိုးသားပြန်လည်စာကြည့်တိုက်များ, ထုတ်လွှင့်ခြင်း, မော်ကွန်းတိုက်ကနေထက်ပိုမို 35 အဓိကအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ, ဒစ်ဂျစ်တယ်ထိန်းသိမ်းရေးညွန့်ပေါင်းတည်ထောင်အဘို့တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်သူကပူးတွဲသတင်းအချက်အလက်စနစ်များကော်မတီအတွင်းဒီဂျစ်တယ်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အစီအစဉ်ကိုထူထောင်ရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီပရိုဂရမ်တက်ကြွစွာ, စီမံခန့်ခွဲထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သဖြင့်, သုတေသနဘဝသံသရာတစ်လျှောက်လုံးဒီဂျစ်တယ်ဒေတာ curate ဖို့ရှာကြံသောဒစ်ဂျစ်တယ်ဖွဲ့စည်းမှုစင်တာကိုဖန်တီးရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။
အဆိုပါညျဒါဝိဒျ Sarnoff တံဆိပ်ကြီးမားသော-နေရာတင်ပြချက်များအပါအဝင်ရုပ်မြင်သံကြားနည်းပညာ၏အင်ဂျင်နီယာအဆင့်ရဲ့တိုးတက်မှုမှလှူဒါန်းခဲ့ဘူးသောနည်းစနစ်အသစ်တွေသို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုထူးချွန်ပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ Clyde ဃ Smith ကဂျူနီယာအလိုအလျောက်, server-based တံခါးပိတ်-စာတန်းထိုးစနစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပါအဝင်ထုတ်လွှင့်ကွန်ယက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ၏လျှောက်လွှာများနှင့်ဖြန့်ကျက်၌သူ၏ရှေ့ဆောင်အလုပ်၏အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် 2014 ဆုလက်ခံရရှိအဖြစ်၏ optimization ပါလိမ့်မယ် ပရိသတ်ကိုခှဲခွား၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်၎င်းတို့၏ဦးစားပေး platform ပေါ်တွင်ကြည့်ရှုထွက်ရှာသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးပတ်ဝန်းကျင်၌သူတို့ကိုမှပရိုဂရမ်းမင်း၏ကြွယ်ဝသောရွေးချယ်ရေးရရှိနိုင်စေရန်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများကိုဒီဂျစ်တယ်မီဒီယာ။ Smith ရဲ့အတွေ့အကြုံများကို, ပံ့ပိုးမှုများနှင့်ထောက်ခံမှုဒေသခံထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာများများအတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပညာရေးအတွေ့အကြုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရေးပါလမ်းညွှန်မှုပေးပါပြီ။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ယူခြင်းတံဆိပ်ရုပ်ရှင်ရုံ, ရုပ်မြင်သံကြား, ဂိမ်းများ, သို့မဟုတ်အခြားဆက်စပ်မီဒီယာများအတွက်အကြောင်းအရာဒစ်ဂျစ်တယ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောသိသိသာသာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ အဆိုပါ 2014 ဆုတစ် 44 နှစ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကျော်ပုံရိပ်တွေ၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဂီယာနဲ့နိုင်တဲ့ coding အားမိမိပံ့ပိုးမှုများကို Barry Haskell မှပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Haskell 70 နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစာတမ်းများထက်ပိုမိုထုတ်ဝေခြင်းနှင့် 125 မူပိုင်ခွင့်ထက်ပိုမိုရရှိထားသူဖြစ်ပါတယ်။ သူကစာရေးဆရာသို့မဟုတ် MPEG အပေါ်အခြေခံစာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်သုံးစာအုပ်တွေ, ပူးတွဲရေးသားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Haskell အဆိုပါ MPEG စံချိန်စံညွှန်းမှအဓိကပံ့ပိုးမှုများကိုအောင်, Bell Labs မှာချုံ့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့စီမံခန့်ခွဲ, သူ၏သုတေသနအဖွဲ့က H.264 / AVC စံမှသိသိသာသာပံ့ပိုးမှုများ လုပ်. ရှိရာက Apple Computer ကိုမှာနောကျလိုကျ။
အဆိုပါ Kodak ပညာရေးဆိုင်ရာဆုကိုဆန်းသစ်နှင့်တကယ်ကိုလှုံဆော်အားပေးနည်းလမ်းများမှတဆင့်မည်သည့်အဆင့်မှာပညာရေးဖြစ်စဉ်ကိုတိုးတက်လာတဲ့သူတစ်ဦးတစ်ဦးချင်းစီရိုသေ, ထိုသို့ရုပ်ရှင်၏နည်းပညာများအသုံးချဖို့အသစ်သို့မဟုတ်ထူးခြားသောပညာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်များအတွက်ထူးချွန်ပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ စတိဗ် Wright တစ်ခုအောင်မြင်သော Practitioner နှင့်မာစတာသင်တန်းဆရာအဖြစ်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုရှိသူ၏ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် 2014 ဆုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ Wright ရဲ့အထူးပြုဒစ်ဂျစ်တယ်ဒိုမိန်းအတွက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သူကတာရှည်ရုပ်ရှင်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ် intermediate နှစ်ခုလုံးအတွက်လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုပညာရေးတစ်ခုထောက်ခံသူဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကစုံလင်ဖို့နဲ့, ပေးသည်ဒစ်ဂျစ်တယ် postproduction အတွက်ရုပ်ရှင်၏အရပျကိုခိုင်မာအောင်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်ရုပ်ရှင်ရဲ့တန်ဖိုးပိုမိုအားကောင်းနားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အရောင်စီမံခန့်ခွဲမှု Paradigm အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ Wright "Visual Effects ပေးသည်: အ Aspire အဆိုတော်များအတွက် Essentials" 2005 ကတည်းကမာစတာအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုသင်တန်းဆရာဖြစ်, သူ၏နှစ်ခုစာအုပ်တွေသိရပါတယ်နှင့် "ရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖွဲ့စည်းမှု," တက်ကြွစွာများအတွက်ရုပ်ရှင်အရောင်သိပ္ပံတို့ကိုသွန်သင်သောအလွန်အနည်းငယ်ကြားတွင်ရှိပါတယ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အလယ်အလတ်နှင့်ဖွဲ့စည်းမှု။
အဆိုပါ Samuel L. ဖြစ်တဲ့ Warner သတိရအောက်မေ့တံဆိပ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မည်သည့်ခြေလှမ်းအပါအဝင်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံအသံသည်များအတွက်အသစ်နှင့်တိုးတက်လာသောနည်းလမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ယန္တရား၏ဒီဇိုင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ထူးချွန်ပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ Ville Pulkki နှစ်ခုရှုထောင်နှင့်ပွတ်ဆွဲအားနည်းချက်ကို-အခြေစိုက်စခန်းလွှဲခွင် (VBAP) နှင့် Non-ပေါင်းတစ်စည်းတည်းအားနည်းချက်ကို-အခြေစိုက်စခန်းသုံးခုရှုထောင်အားပွတ်ဆွဲနည်းလမ်းများအပါအဝင် Spatial အသံကမျိုးပွားခြင်းနှင့် Multichannel အသံက rendering ၏လယ်ပြင်၌သူ၏ထူးချွန်ပံ့ပိုးမှုများကို, များအတွက် 2014 ဆုလက်ခံရရှိဦးမည် အားပွတ်ဆွဲလွှဲခွင် (NVBAP) ။ Pulkki ရဲ့ပံ့ပိုးမှုများ၏တန်ဖိုးသည်ရုပ်ရှင်နှင့်ထုတ်လွှင့်အနုပညာအတွက်စွဲငြိဖွယ်ရာအသံပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြင့်အလေးပေးသည်။
အဆိုပါ Technicolor / ဟားဘတ်တီ Kalmus တံဆိပ်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံ postproduction နှင့်ဖြန့်ဖြူးန်ဆောင်မှုအတွက်အရည်အသွေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏အမြင့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းတစ်ခုကတိကဝတ်ကိုထင်ဟပ်စေသည်ထူးချွန်ပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ အဆိုပါ 2014 ဆုသည်သူ၏ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံထုတ်လုပ်မှုနှင့် postproduction ဖြစ်စဉ်များမှဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာများ၏လျှောက်လွှာအတွက်ပံ့ပိုးမှုများကိုဂျင်မ်ဟူစတန်မှပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်သူဒစ်ဂျစ်တယ် intermediate, ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ Master, နှင့်ပွနျလညျထူထောငျအပါအဝင် postproduction ဖြစ်စဉ်များ၏ကျယ်ပြန့များအတွက် State-Of-The-Art ဒစ်ဂျစ်တယ်ပြီးစက်ရုံတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဟူစတန် Motion Picture ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံ '' အကယ်ဒမီအရောင် Encoding စနစ် (အေ့စ်) ၏အကယ်ဒမီနှင့်ဆက်စပ်သောစံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍအဖြစ်ဗီဒီယိုနှင့်ရွေ့လျားမှုရုပ်ပုံသခငျအမျိုးမျိုးသောစံချိန်စံညွှန်းလိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါလုပ်ငန်းအသွားအလာစနစ်များတံဆိပ်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များသို့အိုင်တီဖိုင်-based စနစ်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောထူးချွန်ပံ့ပိုးမှုများကိုအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ဖိလိပ္ပုရေရှိဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မီဒီယာဖိုင် Format အားမိမိအခြေခံပံ့ပိုးမှုများကိုနှင့်ဖိုင်-based Workflows ၏အစောပိုင်း Implementation ကိုများအတွက် 2014 ဆုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ရေရှိဖို့မြောက်မြားစွာအတွက်မဆုပ်အနစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် SMPTE ဖိုင်-based အနှစ်သာရနှင့် metadata ဖလှယ်မှုများအတွက်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အသတ်မှတ်ချက်များဖွံ့ဖြိုးဆဲအာရုံစိုက်ကော်မတီများနှင့်အဆင့်မြင့်မီဒီယာလုပ်ငန်းအသွားအလာအသင်း (AMWA) တွင်။ tapeless အသံနှင့်ဗီဒီယိုရိုက်ကူး, ပစ္စည်းဖလှယ်ရေး Format ကို (MXF) နှင့်အဆင့်မြင့်အာဏာပိုင်များစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ (AAF) အပေါ်သူ၏ရှေ့ဆောင်အလုပ်ဘီဘီစီမှာ Workflows များ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ရေရှိဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက် (ပီပီ) နှင့်အင်တာနက်ပရိုတိုကော (IP) ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းတိုက်ရိုက်ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ဖိုင်-based Workflows အပေါ်အာရုံစိုက်ထားတဲ့ IP ကိုစတူဒီယိုနှင့်အတူဖိုင်-based လုပ်ငန်းအသွားအလာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနေဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါကင်မရာကိုမူရင်းနှင့် Imaging ကတံဆိပ်တီထွင်မှုသို့မဟုတ်အာရုံခံကိရိယာများ, ပုံရိပ်အပြောင်းအလဲနဲ့အီလက်ထရွန်းနစ်နှင့်ပုံရိပ်ကိုဖမ်းယူ devices များခြုံငုံဂျနှင့် application အပါအဝင်ပုံရိပ်နည်းပညာတိုးတက်လာဖို့ related သိသိသာသာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုများအသိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်လက်ခံရရှိသူကိုရိုသေ။ Eric R. Fossum ဟာ metal-oxide-semiconductor (CMOS) တက်ကြွစွာ pixel အာရုံခံကိရိယာ (APS) နည်းပညာများ၏တီထွင်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၌သူ၏ခေါင်းဆောင်မှုအသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် 2014 ဆုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ Fossum NASA ရဲ့ Jet Propulsion Laboratory မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့စဉ်ဤတိုးပထမဦးဆုံး 1993 အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင်သူကကင်မရာပုံရိပ်အာရုံခံကိရိယာများချတဲ့နည်းလမ်းသစ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်သူများကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးဖို့နည်းပညာအသစ်ရာထူးတိုး။ CMOS image sensor ကိုနည်းပညာယခုကျယ်ပြန့်အဆိုကိုရုပ်ပုံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကင်မရာများ, ဆဲလ်ဖုန်း, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေ, လုံခြုံရေးစနစ်များ, နှင့်အခြားသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်စားသုံးသူပလီကေးရှင်းချထားသည်။
နှစ်စဉ်တဦးတည်း SMPTE ဂျာနယ်ဆုကိုမူလကထုတ်ဝေအရှိဆုံးထူးချွန်စက္ကူရေးသားသူမှတင်ပြထားပါသည် SMPTE ရှေ့ပြက္ခဒိန်နှစ်အတွင်း motion Imaging ကဂျာနယ်။ အဆိုပါ 2014 SMPTE ၏မတ်လ 2013 စာစောင်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ: ", မြင်နိုင်စွမ်း၏ပြတင်းပေါက်တစ်ဦးကြည့်ရန်အမြင့် frame rate နှင့်လူ့ Vision ၏" ဂျာနယ် Award ဆုများအတွက်အင်ဒရူးခ Watson မှပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည် SMPTE motion Imaging ကဂျာနယ်။ အရည်အချင်းကိုဂျာနယ်လက်မှတ်လည်းအမည်ရ၎င်းတို့၏မေလ / ဇွန်လ 2013 ဂျာနယ်ဆောင်းပါးအဘို့အဗင်္ယာမိန်အမျိုးသား Bross, Heiko Schwarz နှင့် Detlev Marpe မှပေးအပ်ပါလိမ့်မည် "စံ Coding The New High-အသုံးဗီဒီယို။ "
အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုစဉ်ဆက်မပြတ်ကာလအတွင်းအသင်း၏ကောင်းဖို့အဘို့ဆက်ကပ်အပ်နှံဝန်ဆောင်မှုများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကိုအသိအမှတ်ပြုသောလူ့အဖွဲ့အစည်းမှထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကိုးကားငါးအပေါ်သို့အပ်နှင်းပါလိမ့်မည် SMPTE အဖွဲ့ဝင်:
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်အတွင်းသြစတြေးလျပုဒ်မအားမိမိအပျနှံနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ယောဟနျသ Beckhaus ။ Beckhaus ပုဒ်မဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ဆပ်ကော်မတီအစည်းအဝေးများနှစ်ဦးစလုံး၏ပြည့်စုံအစီရင်ခံသေချာ, ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေမေးမြန်းချက်အဘို့အဆက်အသွယ်အချက်များကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကုလားထိုင်၏နောက်ထပ်အခန်းကဏ္ဍအပေါ်ယူပြီး, 2003 ကတည်းကပုဒ်မဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နှင့်မိနစ်အတွင်းရေးမှူးသိရသည်။ သူလည်းကွန်ဖရတင်ပြ၏ရှုပ်ထွေးသောလိုအပ်ချက်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း, အနှစ်နှစ်တကြိမ်သြစတြေးလျပုဒ်မညီလာခံများအတွက်အသံအမြင်အာရုံ (AV စနစ်) ကုလားထိုင်အဖြစ်ခြောက်လအသုံးအနှုန်းများတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Beckhaus အမြဲတမ်းသြစတြေးလျပုဒ်မအစည်းအဝေးများ၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေရန်နောက်ကွယ်မှအလုပ်လုပ်နေသောတစ်ဦးဆက်ကပ်အပ်နှံပုဒ်မအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါရန်သူ၏ပံ့ပိုးမှုများကို Siegfried G. အ Heep, ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မ, အဖြစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့နှစ်စဉ်ဂုဏ်ထူး & ဆုပေးပွဲအခမ်းအနား၏ reinvention ၌သူ၏နျဆာပအခန်းကဏ္ဍ။ Heep အတွက်တက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်စံပြအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် SMPTE နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးအဖြစ် ဟောလိဝုဒ် ပုဒ်မအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်မန်နေဂျာ။ 2007 မှာတော့သူကယနေ့ဖြစ်လာသည်သော Full-စုံတဲ့, အရည်အသွေးမြင့်ဆုဖြစ်ရပ်မှသေးငယ်တဲ့အခမ်းအနားကနေအဖြစ်အပျက်ကိုပြောင်းလဲ, အသစ် reimagined ဂုဏ်ထူး & ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာအဖြစ်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ခံခဲ့ရသည်။ Heep နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှု, အရည်အသွေး, နှင့်ဂုဏ်သိက္ခာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြပွဲတိုးတက်လာဖို့ကူညီခြင်း, ကတည်းကနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသည်သူ၏အခန်းကဏ္ဍ reprized သိရသည်။
အတိတ် 25 နှစ်အတွင်းကသူ၏ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အီတလီနိုင်ငံပုဒ်မ၏ထောက်ခံမှုများအတွက် Federico Savina ။ မူရင်းတစ်ဦးအဖြစ် SMPTE 1989 အတွက်အီတလီနိုင်ငံပုဒ်မ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းဘို့အသနားခံတဲ့သူအသင်းဝင်များ, Savina အတွင်းရေးမှူး / ဘဏ္ဍာရေးမှူးနှင့်မန်နေဂျာများ၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် 10 နှစ်ပေါင်းပုဒ်မဘုတ်အဖွဲ့်ထမ်းဆောင်ယင်းပုဒ်မတစ်ခုရေရှည်ပံ့ပိုးခဲ့သည်။ Savina တက်ရောက်အပေါင်းတို့နှင့်ပုဒ်မလှုပ်ရှားမှုများကိုအထောက်အကူပြုရန်နှင့်ဆောင်ခဲ့အတွက်ဆာခဲ့ SMPTE 2013 အတွက်ရောမမြို့မှဒေသဆိုင်ရာနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ။ ရိုးမားတက္ကသိုလ်တွင်တစ်ဦးကပါမောက္ခ, Savina ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံ (D-ရုပ်ရှင်ရုံ) ပညာရေးအတွက်ဘားပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ကြိုးပမ်းလျက်, သူအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဆင့်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုမိတ်ဆက်နှင့်အတူသူ၏ကျောင်းသားများကိုများကိုလုပ်ဆောင်နေသည် SMPTE.
သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ကတိကဝတ်များအတွက်တီဂျေဖြစ်သူ Scott ဂျူနီယာအတ္တလန်တာပုဒ်မဖြစ်ရပ်များအတွက်အရည်အသွေးစံပြုစုပျိုးထောင်ရန်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ဆန်းသစ်သောနည်းပညာများအဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်း၌သူ၏များပြားလှသောအဆက်အသွယ်နဲ့သူ့ရဲ့အနီးကပ် alignment ကိုကောင်းစွာကွပ်မျက်ခံရ, နည်းပညာပိုင်းမှုတ်သွင်းလစဉ်အစည်းအဝေးများတစ်ဦးစုဆောင်းမှုမှဦးဆောင်ခဲ့ကြသည်။ Scott ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတော်အားဖြင့်, အတ္တလန်တာပုဒ်မယင်း၏အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူနှစ်ဦးစလုံးအတွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကိုတှေ့မွငျခဲ့သညျ။ အထူးသဖြင့်ပုဒ်မရဲ့ 2007 "ဗီဒီယိုကျော်အိုင်ပီ" နှီးနှောဖလှယ်ပွဲများ၏ထုတ်လုပ်မှုအားမိမိပံ့ပိုးမှုများကိုအထူးအဖြစ်အပျက်ပရိုဂရမ်းမင်းအတွက်ထူးချွန်ဘို့ဘားထားကြ၏။ အားလုံးနောက်ဆက်တွဲအထူးဖြစ်ရပ်များအားဖြည့်ထွက်ကိုရောင်းပြီ SMPTE'' s ကိုခြွင်းချက်နဲ့မှုတ်သွင်းခံဖြစ်ရပ်များထုတ်လုပ်ဘို့ဂုဏ်သတင်း။
ပြန်လည်ထူထောင်၌သူ၏နျဆာပအခန်းကဏ္ဍများအတွက်ပတေရုသအမ် Weitzel SMPTE ဗြိတိန်ပုဒ်မနှင့်ပုဒ်မနှင့်၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်ပေးပရိုဂရမ်များ၏အရည်အသွေးတိုးတက်မှုကားမောင်း၌သူ၏ခေါင်းဆောင်မှုသည်။ အထူးသဖြင့်ကျောင်းသားများနှင့်တက္ကသိုလ်များမှဗြိတိန်ပုဒ်မ, Weitzel ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှု, ပြဌာန်းခွင့်နှင့်အဝေးရောက်နောက်ကွယ်မှတစ်ဦးကကားမောင်းအင်အား, စစ်ဆင်ရေး၏၎င်း၏ပထမဆုံးနှစ်နှစ်ကာလအတွင်းပုဒ်မရဲ့အဖွဲ့ဝင်အတွက် 200 ရာခိုငျနှုနျးတိုးဖို့လှူဒါန်းခဲ့ပါပြီ။ သူ၏အမြင်သာခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့အလုပ်ဖြစ်တယ်အဖြစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ core မစ်ရှင်နှင့်ရည်မှန်းချက်များသည်မိမိစိတ်အားထက်သန်မှုအစဉ်အဆက်-ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည် SMPTE နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနှင့်ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်မှာ။
စံချိန်စံညွှန်းဆုကိုအတွက် Excellence တက်ကြွစွာလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စံချိန်စံညွှန်းများလုပ်ငန်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတိုးတက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြကြောင်းတစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများကအသိအမှတ်ပြုသည်။ အဆိုပါ 2014 ဆုဗီဒီယိုနှင့် D-ရုပ်ရှင်ရုံထုတ်လုပ်မှုကို real-time လျှပ်စစ်နှင့် optical မီဒီယာစီးဆင်းမှု interfaces သက်ဆိုင်သောစံချိန်စံညွှန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်၌မိမိစဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်ယောဟနျသ Hudson မှပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ Hudson အဆိုပါရေးသား SMPTE 3Gb / s ကိုအမှတ်စဉ်ဒစ်ဂျစ်တယ် interface ကို (SDI) မိမိအလုပ်နှင့်အတူအပြိုင်အတွက်စံလိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ, စက်မှုလုပ်ငန်းအားဖြင့်အင်တာဖေ့စတစ်လျင်မြန်စွာနှင့်အောင်မြင်သောကလေးမွေးစားခြင်းအတွက်ရလဒ်, သူသည် 6Gb / s နှင့် 12Gb ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အဓိကကစားသမား / UHDTV SDI interfaces ့။ Hudson ရဲ့ SMPTE အလုပ်, ကတိကဝတ်များနှင့်အရည်အချင်းကိုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်ပြိုင်ဘက်များနှင့်အတူ Collegiate ဆက်ဆံရေးသဘောထားနှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်။
ယခင်ကကြေညာခဲ့သည်နှင့်အမျှအသစ်ရှစ် SMPTE ဂျွန်မက်ကော့စကီ၊ အင်ဒရူး Quested၊ Vince Roberts၊ Jim Starzynski နှင့် Colin R. Wright တို့ဖြစ်သည်။ Fellows induction နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို www ။smpte.org / 2014fellows ။
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE-GeorgeLucas.jpg
ဓာတ်ပုံ Credit: ဘလွန်းဘာ့ဂ်သည် Getty မှတဆင့်ပုံများ
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE-LeonardoChiariglione.jpg
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE-JohnLogieBaird.jpg
ဓာတ်ပုံ Credit: အဆိုပါဘဝကိုရုပ်ပုံငွေကောက်ခံ / Getty Images
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/SMPTE/SMPTE-IoanAllen.jpg
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ SMPTE SMPTE 2014 ဂုဏ်ထူး & ဆုပေးပွဲ Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏ Society က သိုလှောင်ခြင်း 2014-08-27
ယခင်: CueScript ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဖြန့်ဖြူး၎င်း၏ကြီးထွားလာ Slate မှ Visual Technologies ကအိန္ဒိယ (VTI) ထည့်ပေးသည်
နောက်တစ်ခု: ဖုန်းများအတွက်သို့ပြောင်းပါ DM အင်ဂျင်နီယာများအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်အချက်ပေးစနစ်များထည့်သွင်းပေး DASDEC ပံ့ပိုးမှု